5 Best zokufikela Winter EYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 5 Best zokufikela Winter EYurophu
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 29/02/2020)
IYurophu likhubalo ethile zasebusika ngethuba leenyanga kubanda ukuba azifani nayiphi na indawo apha ehlabathini. Kukho ezininzi iintlobo, kwaye akukho neendawo ezimbini babe imvakalelo efanayo kunye nomoya. Inyaniso, Abantu abaninzi bathi ezidolophini nasezixekweni ngexesha leenyanga kubanda uzive ngathi uhambela indawo entsha. Ebusika uyakwazi fantastic ukuguqula Europe ngokupheleleyo, kwaye nabo, Unokubhala amava amatsha ngokupheleleyo neendwendwe ukuba abakwazi kufumana naliphi na elinye ixesha lonyaka. Nekhephu eziwa kuzisa ngayo emininzi imisebenzi ebusika kunye neeholide ezibalulekileyo ezenza zonke zehlobo kakhulu. Nangona yobuninzi utshintsho nobuhle, akunakwenzeka ukuba ukuhambela yonke. Ukuba uyafuna ukuhamba kwezinye iindawo zokuhamba edume, ndwendwela le 5 Iindawo ebusika eYurophu.
izithuthi kaloliwe yeyona ndlela indalo ahambe. Eli nqaku yabhalwa ukuba afunde Train Travel kwaye wenziwa ngu Gcina A Train engambi Amatikiti kaloliwe Website In The World.
1. Winter zokufikela EYurophu: Budapest, Hangari
Ukuba ukhangela ubusika ukuba uya mangaza wena, koko jonga Akukho ngakumbi kwe Budapest. Yeyona isixeko ogqibeleleyo ngemoto ubusika. Esinye sezizathu eziphambili kukuba abaninzi bakhetha Budapest yinkqubo efikelelekayo. Ufumana ukuba idolophu elihle ngereyithi ezifikelelekayo. Budapest idla izele abakhenkethi ehlobo. kunjalo, ebusika, ubona ubuhle umzi nezihlwele engephi. Ngaphandle kwaloo nto, you get a lot of chimney cakes and tasty wine.
An ibhonasi olongezelelweyo yeyona mihle uMargaret Island. It is indawo ephelele ukuba utyelelo xa ufuna ukuba eyavelela snowball ekulweni. A lot of balapha kunye abakhenkethi zibuthe kunye nabahlobo babo onwabele nekhephu. Ukuba nokulwa snowball ungekho wena, kutya iZiko loFikelelo olwenziwe Lula phambi woxande olude! Budapest City Park iba salo ice skating ebusika. Xa ugqibile udlala ekhephini, ungahambisa kwi ukuya leebhate. Le Gellert Spa emangalisayo yindawo enkulu ukushushubeza aze axhamle amanye amanzi thermal.
2. Venice, ElamaTaliyane
Venice, ukuze kube yinto yokuqala ukuza engqondweni xa ngqondweni nobusika European. kunjalo, ukuba baye kwisixeko zemijelo ebusika, uya kuyikhumbula ngonaphakade. Izitrato ezixineneyo kunye cafes ezinengxolo toned phantsi, uze ubone icala umzi ukuba ihlobo akakwazi ukubonisa. Yonke le umsindo befuna kwiinyanga zasehlotyeni ithathwa Zola kunye nomoya serene ukuba ngogqibeleleyo ukuze ehle ubusika. kunjalo, kubalulekile ukuqaphela ukuba isixeko siqalisa ebomini ngokukhawuleza kakhulu xa Venice Carnival imiqulu emhlabeni. wonke February, umzi ufumana kwakhula iindwendwe, kanye buso Beje ngomkhukula ezitratweni dolophu. izinxibo Creative kunye abadanisi ezitratweni zazise esi sixeko ngembali ezimibalabala ebomini. Ukuba ufuna yasebusika eliphilileyo ukuba awusoze uyilibale, wabeka eVenice kuluhlu lwakho.
3. Winter zokufikela EYurophu: Paris, Fransi
France inxulumanisa uninzi lwabantu kunye neendidi emnandi angafani zothando. kunjalo, eli lizwe uya umtsalane ngakumbi xa adlula emhlabeni ebusika, ingakumbi kwi komkhulu. IParis into emangalisa kungakhathaliseki ukuba ixesha lonyaka ukuba zihambe. Ngelishwa, abantu abaninzi ukuba babe nayo ngexesha lonyaka esibandayo. Paris, umzi uthando romance, ngokuqinisekileyo akunanze kwaye ozithandayo ukuba awufuni engqondweni unxibe ibhatyi efudumeleyo kunye nezinye impahla ebusika. Leeholide zehlobo kuzisa eParis ebomini. Iindwendwe akakwazi kuphela ukuba bagxile ukutya okumnandi nemikhosi newayini. kunjalo, ngayo kwakhona ixesha ogqibeleleyo ukubona iziganeko ezifana I Festival Wonderful kwi Musee des Arts Fairground kwaye i Festival Lights kwi Jardin des Plantes.
Phonononga iimarike sixeko izitrato ehonjisiweyo, xa ungenisa ubuhle isixeko. Winter lixesha ogqibeleleyo ukuba i uhambe ecaleni Seines iibhanki okanye ulahlekile kwizitalato Le Marais. Xa ubona ukuba, uyakwazi pop ube cafe izindawo uze ube isiselo elungileyo. Xa oko kwenziwa, uyakwazi ukubona zonke iindawo eziphambili eParis ngemigca ezimbalwa.
Nangona amawaka abakhenkethi zithontelane Austria unyaka wonke, kukho ethile Feel fairytale ebusika. Zonke iidolophu nezixeko kweli lizwe babe bakholelwa ingane ukuba wahlukile kakhulu. Kukho lipholile ngokuqhelekileyo ezibalulekileyo ukususela kuNovemba ukuya kuMatshi. Oku kuthetha ukuba abathandi ikhephu uqinisekile ukuba sidumise nobusika Austrian. Ukuba ufuna ukubona undoqo Austria zasebusika, ahambele Vienna. Le capital grand idume umoya wayo festive nezinxibo uphawu. Ukuba unomdla ezithile zokuthenga ebusika, qiniseka ukuba atyelele iimarike Christmas. EVienna ine ezinye kwiimarike ethandwa yonke iYurophu. Iindwendwe ukuba axhamle Cuisine emnandi Austria uze usele iwayini ethile mulled. Ngaphandle kwaloo nto, kukho izinto ezahlukeneyo ezenziwe okumnandi ephatha chocolate.
5. Winter zokufikela EYurophu: Interlaken, Swizalend
Ukuba umntu inyathelo abangakwaziyo ukucinga ukuchitha isikhathi kwisixeko le holide zobusika, ke Interlaken e Switzerland nguye oya ebusika kuwe. Ngokungafaniyo ethandwayo, Iindawo kwisixeko esikhulu, Interlaken yidolophu Irizothi kufuphi Alps. Amawaka abaqubhi kunye snowboarders kwenza indlela yabo Interlaken yonke ebusika kwaye usebenzise yomhlaba emangalisayo linikeza ndawo. Interlaken na ukutyeba omabini. Okokuqala, proximity kunye nokufikelela lula kwimisebenzi entabeni ezimangalisayo. Okwesibini, inikeza yonke enye into ofuna xa kuziwa kumaziko. Nokuba uyayonwabela fun ukukhanya, okanye ufuna ukuhlola imida yakho ngomendo kakhulu, Interlaken ukuba wena. Enoba umbono wakho fun yi, uya kukuvuyela ukwazi ukuba ungenza indlela yakho wabuyela edolophini kwaye ixesha olichitha fondue.
IYurophu into wonke. Kukuwe ukuba ugqibe ukuba ubusika yakho Entle ebukeka ezifana nokusetyenziswa Gcina A Isitimela ukuba khona. Kukho kakhulu amava kwiinyanga zasebusika, so get adventurous and take a bold step forward.
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “5 Winter zokufikela EYurophu” kwi sayithi yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwinter-destinations-europe%2F – (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
europetravel trainjourney tips uloliwe travelaustria travelfrance travelitaly indawo yokuhamba winterdestination winterdestinations wintertravel